हलेसी विकास समिति भर्सेस नगरपालिका हो त ? - Halesi Khabar
हलेसी विकास समिति भर्सेस नगरपालिका हो त ?
२८ भाद्र २०७७, आईतवार १७:०९ ।
विश्वको एकमात्र त्रिधार्मिकस्थल नेपालको प्रदेश नम्बर १ को खोटाङ जिल्लामा पर्दछ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पर्ने हलेसी महादेव, मारतिका गुम्बा र किराँत खक्चिलिक्पु ( रैछाकुले) ओडार विश्वमा तीन छुट्टाछुट्टै धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिका लागि सङ्गमस्थलका रुपमा विकास भएको स्थान हो ।
जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित हलेसीको समग्र विकासका लागि धार्मिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सकिने यस ठाउँको विकास गर्न नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारको मातहतमा राखेर काम गर्दै आएको छ । नेपालको पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ धाम, बाराहाक्षेत्र, पाथीभारा जस्तै धार्मिक पर्यटनका लागि अति महत्वपूर्ण रहेको हलेसीको चौतर्फी विकास गर्न सरकारले हलेसी महादेव विकास समितिको गठन गरेर सङ्घीय सरकारको मातहतमा राखेर कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विकास समितिलाई नेपाल सरकारले निश्चित क्षेत्राधिकार तोकेर सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशको नियुक्ती गर्दै आएको छ । सरकारको एक निकायका रुपमा विकास समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विभिन्न मठ मन्दिरको व्यवस्थापन, आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटनका प्रर्वद्धन यसका लागि प्रचार प्रसार, त्यस क्षेत्रको विकासका लागि गरिने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा बजारीकरणका लागि यस समितिले काम गर्दै आएको छ ।
हलेसीको विकासका कामले तीव्रता पाउन लागेपछि विकास समिति रहेको नगरपालिकाले भने केही बेखुसीपन देखाएको छ । पछिल्लो समय हलेसी महादेव विकास समितिले कामलाई तीव्रता प्रदान गरेको छ । विकास समितिको नेतृत्वमा पूर्व सांसद तथा वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आमन्त्रित स्थायी कमिटि सदस्य टंक राईलाई ल्याएपछि गतिविधिले तीव्रता पाएको हो ।
नगरप्रमुख ईवन राईले केही बिसन्तुक गरेको जस्तो देखिने झल्को दिन थालेका छन् । केही समय अगाडि आफ्नो फेसबुक पेजमा लामो स्टाटस हाल्दै उनले यस्तो झल्को दिएका हुन् । उनले आफ्नो स्टाटसमा संस्था वा व्यक्ति कसैलाई नाम त तोकेका छैनन् तर, केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले अनुदान रोक्ने तथा विकास निर्माणको काममा असहयोग गर्ने षडयन्त्र भइरहेको कुरा उठाएर विरोधको सङ्केत गरेका छन् ।
स्मरणीय कुरा के छ भने केही समय अगाडिदेखि नगरपालिकालाई विकास समितिको कृयाशीलता मन नपरिरहेको कुरा आइरहेको थियो । हलेसी महादेव विकास समिति सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको निकाय भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने क्रममा केही विवादहरु देखिएका थिए । उक्त विवादलाई नगरपालिकाले उच्च अदालतमा रिट समेत हालेको थियो ।
उक्त काम रोकीदिन गरिएको रिटमा उच्च अदालतले समेत काम रोक्न आदेश दिन नमिल्ने भनेपछि थप समस्यामा नगरपालिका पर्न गएको हो की ? र विकास समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेको कामलाई व्यवस्थित गर्न कोशिस गरिरहेको बेला स्टे अर्डरको माग गरेर उच्च अदालत जानुको पछाडि कुनै स्वार्थ थिएन भन्न सकिन्न ।
यसले के देखाउँछ भने नगरपालिकाले आफूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र परेको त्रिधार्मिकस्थल हलेसी महादेव स्थानलाई आफ्नो अनुकुल निर्माण गर्ने सपना हो । यो सपनाले सार्थकता नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
हलेसीको विकासको एउटा कडीका रुपमा बुझ्ने क्षमता आउनु आफैमा खराब कुरा रहेन तर, हलेसीलाई त्यस नगरपालिकाको मात्र नभएर विश्वको भनेर चिनाउने काममा नगरको पहुँच पुग्न गारो छ ।
यसपटक नगरपालिकाको अनुमानित आएमा राखिएको बजेट करीब रु ५२ करोडले कुन गाउँमा के विकास सम्भव छ । पर्यटनको कार्यक्रममा नगरले देखेको हलेसी बाहेक अरुपनि त हुन सक्छ नी ! यसका बारेमा मेयर साबको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएन नी । यो पनि खोज्न जरुरी छ ।
कुरा कता कता अलमलिएका होलान् । तर, अलमलमा पर्नु भन्दा अगाडि बुझ्न पर्ने कुरा मेयर साहेबको राजनीतिक उदय नेपाली काँग्रेसको पृष्ठभूमिबाट भएको छ । यता हलेसी महादेव विकास समितिको नेतृत्व स्वभाविक हिसाबले सत्तासिन राजनीतिक दलको निर्णयले भएको हो ।
यसमा पनि योजना निर्माणमा निपुण मानिएका पूर्व सांसद टंक राईले हलेसीमा आफ्नो उपस्थितिले नगरप्रमुखको राजनीतिमा असर पुग्ने आकलन गरिनु कुनै अनौठो कुरा रहेन । तर नुबसझिएको कुरा राजनीतिमा विकासको सपनाको हत्या गर्ने गरी जान सकिन्न । मेयर साबको राजनीतिक भविष्य अहिलेपनि उज्जल रहेको छ ।
राजनीतिको यात्रा अविरल चल्ने हो । आजको मेयर इवन राई भोलीको सांसद र मन्त्रिको लाईन हो । यसलाई कमजोर हिसाबले आँकलन गर्न मिल्दैन । तर, आज विकास समिति भर्सेस नगरपालिका जस्तो देखिने कार्य रोक्नु नै राम्रो हुनेछ । कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार सबै तह र निकायलाई तोकिएका छन् ।
यसमा दाबी विरोध गरिरहन जरुरी देखिन्न । होला अहिले उन्मादमा केही अभिव्यक्ति दिएर लोकप्रियता आउला र आउन सक्छ । तर इतिहाँस बनाउने हो भने सम्झौताको बाटोमा मेयर साबले पाईला चाल्नै पर्दछ । हलेसी मन्दिर परिसरको कुरा होईन हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका भरीका देव देवालयको विकास विस्तारमा केन्द्रको लगानी कसरी तान्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस गर्न जरुरी छैन र !
यदि इतिहास निर्मम बनाउने हो भने आफुलाई केन्द्र बिन्दु भन्दामाथि राखेर समाज र मातृभूमिको पक्षमा लाग्नु पर्दछ । नगरपालिकाभित्र पर्ने हलेसी महादेव स्थान त्रिधार्मिकस्थलको विकास र आकर्षणले हलेसी कै विकासलाई साथ दिने हो ।
यसले जन्तेढुङ्गा र बाराहापोखरी लगायतका नागरिकहरुलाई हौसला दिन सक्नु पर्दछ । यो आयामिक कार्यक्रम हुने भएकाले अब हलेसी महादेव विकास समिति होइन विकास कोषका रुपमा लैजान नगरले समेत सकरात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ ।